Izitayela Zezikhwama - Abakhiqizi Bezikhwama Zekhwalithi Ephezulu, Abahlinzeki
Isitayela esikhwameni esisebenza ngezinto eziningi, esonga imali, nesithandwayo esingabamba iso ngemidwebo efanele. Kusebenza cishe kuzo zonke izimboni nezinhlelo zokusebenza.
Abakhiqizi abaningi abahamba phambili bokudla emakethe yomhlaba sebevele basebenzisa umshini we-GAOGE GPB Rotary Pouch Packaging Machine ukupakisha imikhiqizo yabo emincane / emikhulu ekhihliwe kanye nempuphu ibe yizikhwama zokuma kanye nezikhwama zokumisa iziphu.
Isikhwama sokumisa esingezansi esigoqiwe nemiphetho ebushelelezi engafakwa izinhlelo zokuncipha, izici ezisebenzayo nezinhlobonhlobo ze-raster kanye nemiklamo yokusika. Imishini yokupakisha emile ivumela ukuthi kuvalwe izimvu zamanzi ezinqamulelayo (noma emaphethelweni) ukwakhiwa kwesikhwama. Khetha inketho engcono kakhulu yezidingo zakho.
Isitayela sesikhwama sokubonisa okuvelele kokuma. Ubuso bayo obubanzi bulungele amalebula nemidwebo, futhi bungaba nesikhungo noma uphawu oluphakathi nendawo olumile lwamahluzo ngaphambili nangemuva. Ifanele cishe zonke izimboni.
Isikhwama somcamelo esinezinhlangothi ezifakwe ngaphakathi senziwe emishinini yokupakisha emile ye-GAOGE kusuka ekushiseni noma kumaroli efilimu afudumelekayo. Isikhwama sikulungele ukupakisha imikhiqizo enhlobonhlobo ngemithamo efinyelela kumalitha angama-60.